ClickTale anga ari piyona muindasitiri ye analytics, achipa maitiro ehunhu uye yakajeka visualizations iyo inobatsira ecommerce uye analytics nyanzvi kuratidza nekuvandudza pazvinhu zvine yavo saiti. ClickTale's Nyowani nyowani Edhisheni inopa kumwe kushanduka, iine kodhi-yemahara nzira dzekubatanidza zviitiko munzvimbo yako yese. Ingonongedzera kuchinhu chako chechiitiko uye tsanangura chiitiko ... ClickTale ndiyo inosara. Iine Visual Mhariri, Clicktale ndiyo imwe yemakambani ekutanga kupa mhinduro mukati
NDINODZIDZA USAENDE: Matatu Ekubuda Ane Maitiro Asinga Gumbure Vashanyi Vako
Mugovera, Chivabvu 2, 2015 Svondo, October 4, 2015 Tom Mapopoma
Buda chinangwa tekinoroji (Chii icho?). Dhijitari yekushambadzira vhezheni yeKC uye Iyo The Sunshine Band's Ndapota Usaende. Takaratidza nekudzokorora kuburikidza neA / B kuyedza iyo kushandisa yekubuda chinangwa tekinoroji kuti itange kufukidza inogona kuve nzira inoshanda kwazvo yekununura vachisiya vashanyi. Mienzaniso yezvakakonzera zvemukati zvinosanganisira chirevo chemakodhi ekudzikisira kana tsamba yekusaina-yekumisikidza. Vamwe vanogona kupokana izvi zvinokanganisa zvinoderedza ruzivo rwevatengi. Kuchengeta izvi mupfungwa, pazasi pane a
Chii chinonzi Analytics? Chinyorwa cheKushambadzira Analytics Technologies
Muvhuro, July 7, 2014 Svondo, October 19, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva isu tinofanirwa kudzokera kune zvekutanga uye tinonyatsofunga nezve aya matekinoroji uye kuti vari kuzotibatsira sei. Analytics padanho rakanyanya kukosha izita rinobva mukugadziriswa kwenzvimbo kwe data. Isu takurukura analytics terminology kwemakore ikozvino asi dzimwe nguva zvakanaka kuti udzokere kune zvekutanga. Tsananguro yeKushambadzira Ongororo Yekushambadzira analytics inosanganisira maitiro uye matekinoroji anoita kuti vashambadzi vaongorore kubudirira kwezvavanoita zvekushambadzira.